यी चार स्थानमा कोठी भएका व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी र धनवान, तपाईको पनि छ की ? – Ramailo Sandesh
यी चार स्थानमा कोठी भएका व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी र धनवान, तपाईको पनि छ की ?
काठमाडौँ । मान्छेको शरिरमा हुने कोठिले पनि उसको भाग्य बताउने ज्योतिष विज्ञानले बताउने गरेको छ। तपाई सबैमा कहिँ न कहिँ कोठी हुन्छ तर ती सबै शुभ हुदैनन्।
कतिपयले त आफुलाई सुन्दर देखाउन आफै कृतिम कोठि पनि बनाउछन्। त्यो भन्दा पनि शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा हुने कोठिहरुले कस्तो संकेत गर्छ त ? ज्योतिष विज्ञानको आधारमा निम्न स्थानमा कोठी हुनु भाग्यको प्रतिक मानिन्छ।
१) हत्केलाको कोठीः
हातको कोठी हुनु निकै शुभ र राम्रो मानिन्छ। ज्योतिष अनुसार जो मानिसको हत्केलामा कोठी हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति भाग्यमानी हुन्छन् विशेषगरी कोठी मुट्ठीभित्र पर्छ भने।
यस्ता मानिसको जीवनयापन निकै राम्रो तरिकाले हुनुका साथै निकै धनवान पनि हुन्छन्। विवाह पछि यस्ता मानिसलाई ससुराली र घरमा पनि निकै सम्मान मिल्ने गर्दछ।
२) नाकमा कोठीः
नाकमा कोठी भएका मानिसहरु निकै नखरा गर्ने किसिमका भएपनि उनीहरुको मन निकै कमलो, राम्रो र सच्चा हुन्छ। यसका साथै यस्ता मानिसहरुले आफ्नो करियरमा निकै प्रगती गर्ने गर्दछन्। प्रगती ढिला भएपनि उनीहरु आफ्नो करियरमा एक राम्रो गन्तव्यमा पुग्छन्।
३) चिउँडोमा कोठीः
४) पिठ्युँमा कोठीः
जो व्यक्तिको पिठ्युँमा कोठी हुन्छ, उनीहरु निकै रोमान्टिक हुन्छन् र घुमफिरका शौखिन हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरु निकै हँसीमजाक गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। पिठ्युँमा कोठी हुनेहरुलाई उनका सन्तानले निकै माया गर्ने गर्दछन्। उनीहरु सबैसँग सुखी हुन्छन्।
गायनमा फर्किँदै समीक्षा अधिकारी ,पोस्ट गरिन यस्तो कुरा,हेर्नुहोस भिडियो